लक्षणसहितका कोरोना संक्रमित थपिने क्रम तीब्र, भेन्टिलेटर र आइसियूको चरम अभाव - SangaloKhabar
लक्षणसहितका कोरोना संक्रमित थपिने क्रम तीब्र, भेन्टिलेटर र आइसियूको चरम अभाव
— संक्रमितमा ज्वरो, रुघाखोकी र श्वासप्रश्वासमा समस्या
— स्थिति थप जटिल उन्मुख
— संक्रमित २० हजार नाघे
— लकडाउन हटेपछि २२४१ संक्रमित थपिए
काठमाडौं उपत्यकामा पछिल्ला तीन दिनमा ८९ जना संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै उपत्यकामा संक्रमितको संख्या ५ सय ८९ पुगेको छ । काठमाडौंमा ४ सय २९, ललितपुरमा ९६ र भक्तपुरमा ५७ जना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । संक्रमितको उमेर समूह १६–५५ वर्ष रहेको छ ।
सरकारले लक्षणविहीन संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमा बस्न सकिने बताएको थियो । तर, अब बिस्तारै दैनिक लक्षण देखिएपछि बिरामीहरु अस्पताल पुग्ने गरेको र कोरोना परीक्षण गराउँदा संक्रमण पुष्टि हुने गरेको पाइएको छ । लकडाउन पूर्णतः अन्त्य भएपछि २ हजार २ सय ४१ जना संक्रमित थपिएका छन् । लकडाउन हटेपछि थप १६ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले बताए ।
समुदायस्तरमा संक्रमण फैलिन थालेपछि जनस्वास्थ्य विज्ञले थप सतर्कता अपनाउन नागरिकलाई सुझाव दिएका छन् । अहिलेसम्म २० हजार ८६ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । संक्रमितमध्ये ५७ जनाको मृत्यु भएको छ । हालसम्म ३ लाख ८२ हजार ४ सय ९० जनाको आरटी–पिसिआर प्रविधिबाट कोरोना परीक्षण गरिएको छ ।
संक्रमितमध्ये १४ हजार ४ सय ९२ जना डिस्चार्ज भएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर ५ हजार ३ सय ३८ जना आइसोलेसनमा उपचाररत छन् ।
जोखिम बढ्नुका कारण
– कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावकारी नहुनु
– भौतिक दुरी कायम नहुनु
– नाकामा सबैको कोरोना परीक्षण नहुनु
– आवतजावतका क्रममा मास्कको उचित प्रयोग नहुनु
– पर्याप्त मात्रामा परीक्षण दर नबढ्नु
– लकडाउन अन्त्य हुनु
अहिले दैनिक ५ हजार बढी सर्वसाधारण काठमाडौं उपत्यका भित्रिने गरेका छन् । तर, ती सबै नागरिकको कोरोना परीक्षण हुन सकेको छैन । यस्तै, लकडाउन खुलेयता व्यक्ति व्यक्तिबीचको भौतिक दुरी कायम हुन सकेको छैन । जसकारण पनि जोखिम थप बढ्दै गएको छ ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक डा. बाबुराम मरासिनीले नेपालमा कोरोना संक्रमणको बाढी भारतबाट आएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले कोरोना संक्रमणको खतरा छ है । सचेत हुनुहोस् भनेर भनिदिएको भए आज सबैले मानवीय व्यवहारमा परिवर्तन गर्ने थिए ।’ उनले कोरोनाबाट बच्ने मुख्य उपाय मानवीय व्यवहार नै रहेको बताए ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल टेकुका प्रवक्ता डा. अनुप बास्तोलाले कोरोना संक्रमणको जोखिमबाट बच्न आम नागरिक सचेत हुनुको विकल्प नभएको बताए । सरुवा रोग विशेषज्ञसमेत रहेका प्रवक्ता डा. बास्तोलाले काठमाडौं उपत्यकामा संक्रिमतहरुको संख्या बढ्न थालेपछि आम मानिस त्रसित बनेको उल्लेख गर्दै सबैले सावधानी अपनाउनुपर्ने बताए ।– प्रशान्त वलीले लेखेको यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन १८, २०७७ समय: ७:२१:०९